Home > KitchenWare > tiger
Electric Grill Pan CPK-D130
• 2-Way Style Pans with 2.4-inches deep pan and 1.1-inches deep BBQ plate great for any type of cooking
• Easy to remove and wash pans
• Adjustable temperature heats up to 446 degrees F/230 degrees C
အသားကင်လို့ရပြီးဟင်းလည်းချက်လို့ရတဲ့အိုးလေးပါ။ရေဆေးမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခုစီ သက်သက်ဆေးနိုင်ပါတယ်။အပူကိုတဖြည်းဖြည်းတင်ပြီးချက်လို့ ကင်လို့ရပါတယ်။
Rice Cooker 1.0 Lt JBA-T10S
• World No. (1) hot rice cooker
• High quality and made in Japan
• Installed3in 1 function and in addition can cook not only rice also dumplings and baozi
• Can manage the time you want with timer
• Include the (9) ways of cooking menu book
• 1.8L and can cook up to5cups by measuring with the cup in it
• Include (9) functions and Can choose the function what you want
• 1. Plain Rice
• 2. Quick
• 3. Mixed Rice
• 4. Sweet Rice
• 5. Multi- grain rice
• 6. Brown Rice
• 7. Porridge
• 8. Slow Cooking
• 9. Steam Cooking
ကမ္ဘာ့နံပါတ် (1) ထမင်းပေါင်းအိုးပါ။ Japan နည်းပညာဖြင့်ထုတ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးက စိတ်ချရပါတယ်။3in 1 Funtions ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆန်အမျိုးမျိုးချက်ခြင်း ၊ နူးအိအောင်ချက်ခြင်း နှင့် ဖက်ထုပ်၊ ပေါက်စီစသည်တို့ ပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ Timer ပါတဲ့အတွက် အချိန်ကို လိုသလို အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ Menu (9)မျိုးပါတဲ့စာအုပ်လည်း လက်ဆောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ၁လီတာဝင်အိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အိုးတွင်ပါသောခွက် (၅)ခွက် ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ Menu မှ Function (9)မျိုး ရွေးပြီး ချက်နိုင်ပါတယ်။ 1. Plain Rice =ထမင်းတစ်မျိုးတည်းသာချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ 2. Quick = အမြန်ချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်း ၊ 3. Mixed Rice = ထမင်းကို အသား၊ အရွက် အခြားသောအစာများဖြင့်ရောချက်ခြင်း ၊ 4. Sweet Rice= ထမင်းအချိုချက်ခြင်း (ဥပမာ-ထမင်းပေါင်း)၊ 5. Multi- grain rice = ထမင်းကို ပဲစေ့ စသဖြင့် အစေ့၊ အဆံများ ဖြင့်ရောချက်ခြင်း ၊ 6. Brown Rice = ဆန်လုံးညို ချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်း (ဆီးချိုဆန်) ၊ 7. Porridge = ဆန်ပြုတ် ပြုတ်နိုင်ခြင်း ၊ 8. Slow Cooking = အသား၊ ငါး စသည်တို့ကို နူးအိအောင် အနှေးချက်နိုင်ခြင်း၊
9. Steam Cooking = ဖက်ထုတ်၊ ပေါက်စီစသည်တို့ပေါင်းခြင်း ။ စိတ်တိုင်းကျချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက် ချကားကောင်းစေမှာပါ။
Rice Cooker 1.0 Lt JBV-B10M
• High quality multi-functional rice cooker
• Using tacook technology and manufactured by technologies from Tiger Co., Ltd and Vietnam
• Tacook is the new unique method that the rice cooker can cook rice and curry at the same time, invented by Tiger Co.,Ltd
• Clean the rice and put into cooker
• And then put the vegetables into the cooker
• The rice and vegetable are done cooking at the same time
• 1L and can cook up to5cups by measuring with the cup in it
• Include (4) functions and Can choose the function what you want
• 2. Synchro-cooking
• 3. Sweet Rice
• 4. Slow Cooking
ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်တဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုးပါ။ Tiger Co,Ltd နှင့် Vietnum ရဲ့ နည်းပညာပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ “Tacook” နည်းပညာဖြင့်ထုတ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးက ကောင်းပါတယ်။ “Tacook” ဆိုတာ Tiger ရဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ ထမင်းချက်ရင်း ဟင်းပါ တွဲဖက် ချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာပါ။ ဆန်ဆေးပြီးအိုးအကြီးဖြင့်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် အတွင်းအိုးထဲသို့ ချက်မည့်ဟင်းလျှာကို ထည့်ပြီး စတင်ချက်ပြုတ်လိုက်ပါ။ ထမင်းကျက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ဟင်းပါအဆင်သင့် ကျက်သွားပါသည်။Menu (9)မျိုးပါတဲ့စာအုပ်လည်း လက်ဆောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ၁လီတာဝင်အိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အိုးတွင်ပါသောခွက် (၅)ခွက် ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ Function (၄)မျိုး ရွေးပြီး ချက်နိုင်ပါတယ်။ 1. Plain Rice =ထမင်းတစ်မျိုးတည်းသာချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ 2. Synchro-cooking = ထမင်းနှင့် ဟင်းတစ်ခါတည်း ချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်း ၊ 3. Sweet Rice= ထမင်းအချိုချက်ခြင်း (ဥပမာ-ထမင်းပေါင်း)၊ 4. Slow Cooking = အသား၊ ငါး စသည်တို့ကို နူးအိအောင် အနှေးချက်နိုင်ခြင်း၊ စိတ်တိုင်းကျချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက် ဘာချက်ချက်စားကောင်းစေမှာပါ။
Rice Cooker 1.0 Lt JNP-1000
• Fair heat convection and non sticking
• Keep warm all day long
ကမ္ဘာ့နံပါတ် (1) ထမင်းပေါင်းအိုးပါ။ Japan နည်းပညာဖြင့်ထုတ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးက စိတ်ချရပါတယ်။ ၁.၈လီတာဝင်အိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အိုးတွင်ပါသောခွက် (5)ခွက်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ အပူပေးစနစ်မှာ အခြားပေါင်းအိုးများကဲ့သို့ အောက်ခြေတစ်နေရာတည်းမှ အပူပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ ဘေးဘက်မှအပူပေးခြင်းပါဝင်တဲ့အတွက် အပူမျှတပြီး ဘာချက်ချက်စားကောင်းစေမှာပါ။ အိုးမကပ်ပဲ ထမင်းကိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
Rice Cooker 1.8 Lt JNP-1800
ကမ္ဘာ့နံပါတ် (1) ထမင်းပေါင်းအိုးပါ။ Japan နည်းပညာဖြင့်ထုတ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးက စိတ်ချရပါတယ်။ ၁.၈လီတာဝင်အိုးဖြစ်တဲ့အတွက် အိုးတွင်ပါသောခွက် (၁၀)ခွက်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ အပူပေးစနစ်မှာ အခြားပေါင်းအိုးများကဲ့သို့ အောက်ခြေတစ်နေရာတည်းမှ အပူပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ ဘေးဘက်မှအပူပေးခြင်းပါဝင်တဲ့အတွက် အပူမျှတပြီး ဘာချက်ချက်စားကောင်းစေမှာပါ။ အိုးမကပ်ပဲ ထမင်းကိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
• High quality thermal lunch box made in Japan
•3Microwavable containers: 1 Main dish,1 Side dish, 1 soup pack
• Exclusive bag can be additionally kept holding hot and cold food
• Size 15 x H 25 cm
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ထမင်းဘူးဖြစ်သည်။ စတီးကြောင့်ပိုမိုအပူကို ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ ထမင်း၊ ဟင်း နှင့် ဟင်းချို(အရည်) ထည့်နိုင်ရန်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။ လုံခြုံပြီး၊ အပူကိုတစ်နေ့လုံး ထိန်းထားပေးနိုင်တဲ့အတွက် အစာကို ပူပူနွေးနွေးစားရပါသည်။ အရွယ်အစားမှာ 15 x H25cm ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ထမင်းဘူးဖြစ်သည်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကိုကြာရှည်ခံစေသည်။ ထမင်း၊ ဟင်း နှင့် ဟင်းချို(အရည်) ထည့်နိုင်ရန် သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။ လုံခြုံပြီး၊ အပူကိုတစ်နေ့လုံး ထိန်းထားပေးနိုင်သည့်အတွက် အစာကိုပူပူနွေးနွေးစားရပါသည်။ Tiger တံဆိပ် ထမင်းဘူးအိတ်လေးလဲ ပါပြီး အရွယ်အစားမှာ 15 x H 25 cm ဖြစ်ပါသည်။
• High quality tiger 0.38L soup cup
• Can keep heat for 48 hours due to stainless steel
• Vacuum insulation structure gives you hot and cold soup longer
အစားအစာထည့်တဲ့စတီးဘူးလေးပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဘူးလေးပါ။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ စတီးကြောင့် ပိုမို အပူကိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ သယ်ရတာလွယ်ကူတဲ့ ဘူးလေးပါ။ အပူအအေး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ 0.38 LT ၀င်ဆံ့ပါတယ်။
Toddlers Vacuum Insulated Bottle MCK-A028
• High quality 0.28L stainless steel bottle made in Japan
• Vacuum insulation structure gives you hot and cold beverage longer
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဓာတ်ဘူးဖြစ်သည်။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကို ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ သယ်ရတာလွယ်ကူပြီး အပူအအေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 0.28lT ၀င်ဆံ့ပါသည်။
Stainless Steel Desk Mug MCM-T050
• High quality 0.50L stainless steel mug made in Japan
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ခွက်လေးဖြစ်သည်။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကို ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ သယ်ရတာလွယ်ကူပြီး အပူအအေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 0.50LT ၀င်ဆံ့ပါသည်။
Stainless Steel Bottle MJA-A048
• High quality 0.48L stainless steel bottle made in Japan
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဓာတ်ဘူးဖြစ်သည်။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကို ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ သယ်ရတာလွယ်ကူပြီး အပူအအေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 0.48lT ၀င်ဆံ့ပါသည်။
Ultra Light Stainless Steel Bottle MMJ-A048
• High quality 0.5L stainless steel mug made in Japan
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ဓာတ်ဘူးဖြစ်သည်။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကိုကြာရှည်ခံစေပါသည်။ သယ်ရတာလွယ်ကူတဲ့ဘူးလေးပါ။ အပူအအေး အသုံးပြုနိုင်ပြီး 0.5LT ၀င်ဆံ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဓာတ်ဘူးဖြစ်သည်။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကို ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ သယ်ရတာလွယ်ကူပြီး အပူအအေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 0.35LT ၀င်ဆံ့ပါသည်။
Electric Air Pot 3Lts PDU-A30S
• High quality No. (1) electric air pot
• Capaity 3L
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ကမ္ဘာ့နံပါတ် (1) ရေနွေးအိုးလေးပါ။unlock နှိပ်ပြီး lock ပေါ်လာမှ ရေနွေးငှဲ့လို့ရတဲ့အတွက် ကလေးများရုတ်တရက်နှိပ်မိရင်လည်း အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။3Ltထိထည့်လို့ရပါတယ်။
Electric Air Pot 4Lts PDU-A40S
• Capaity 4L
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ကမ္ဘာ့နံပါတ် (1) ရေနွေးအိုးလေးပါ။unlock နှိပ်ပြီး lock ပေါ်လာမှ ရေနွေးငှဲ့လို့ရတဲ့အတွက် ကလေးများရုတ်တရက်နှိပ်မိရင်လည်း အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။4Ltထိထည့်လို့ရပါတယ်။
• High quality 1L stainless steel mug made in Japan
• One push open the lid on and can drink directly
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ဓာတ်ဘူးဖြစ်သည်။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ စတီးကြောင့် ပိုမို အပူကို ကြာရှည်ခံစေသည်။ ဓာတ်ဘူးအဖုံးအလယ်ကအ၀ိုင်းလေးကို နှိပ်ပြီး ရေနွေးငှဲ့ နိုင်သည်။ 1LT၀င်ဆံ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ဘူးလေးပါ။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ ဓာတ်ဘူးရဲ့ အဖုံးအလယ်က အ၀ိုင်းလေးကို နှိပ်ပြီး ရေနွေးငှဲ့ နိုင်ပါတယ်။ 1LT ၀င်ဆံ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ဓာတ်ဘူးဖြစ်သည်။ အပူကို (၄၈)နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ စတီးကြောင့် ပိုမိုအပူကို ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ ဓာတ်ဘူးရဲ့ အဖုံးအလယ်ကအ၀ိုင်းလေးကို နှိပ်ပြီး ရေနွေးငှဲ့ နိုင်သည်။ 1LT ၀င်ဆံ့ပါသည်။
Electric Air Pot 5Lts PDU-A50S
• Capaity 5L
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ကမ္ဘာ့နံပါတ် (1) ရေနွေးအိုးလေးပါ။unlock နှိပ်ပြီး lock ပေါ်လာမှ ရေနွေးငှဲ့လို့ရတဲ့အတွက် ကလေးများရုတ်တရက်နှိပ်မိရင်လည်းအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။5Ltထိထည့်လို့ရပါတယ်။